Xisbiyada Cunsuriyiinta oo si weyn uga faa’iday doorashadii Yurub | Somaliska
Af-Soomaali / Germany / Siyaasada
Xisbiyada cunsuriyiinta ah ee ka dhisan wadamada Midowga Yurub (EU) ayaa si weyn guul uga gaaray doorashadii baarlamaanka Yurub ee shalay ka dhacday 28-da wadan ee ka tirsan EU-da. Wadamada qaarkood ayaa xisbiyada cunsuriyiinta ah ay noqdeen kuwa helay cododka ugu badan.
Wadankaan Sweden ayaa xisbiga Sverigedemokraterna (SD) ee siyaasadooda ay ku dhisantahay cunsuriyada ay heleen cododka 9,7% kuwaasoo 2 kurso ka helaya baarlamaanka Yurub. Wadanka France ayaa xisbiga Front National waxay heleen 25,5% kuwaasoo noqday xisbiga ugu weyn ee France ku matalaya baarlamaanka Yurub. 22 kursi ayay baarlamaanka ku yeelan doonaan. Xisbiga UKIP ee ka dhisan UK ayaa isna noqday kan ugu weyn wadankaasi iyagoo helay 27,5% oo u dhiganta 23 kursi.
Xisbiga ka dhisan wadanka Denmark ee lagu magacaabo Dansk Folkeparti ayaa isna helay 26,6% halka xisbiga kale ee asna cunsuriga ah ee ka dhisan wadanka Austria ee lagu magacaabo FPÖ ay heleen 20,5%. Xitaa wadanka Germany oo ah aabaha Midowga Yurub ayaa xisbiga NPD ee ku dhisan siyaasada Naziga uu helay 1 kursi.
Xisbiyada cunsuriyiinta ah ayaa sidoo kale horumar ka sameeyay doorashada wadamada Greece, Poland, Finland iyo Hungary. Iyagoo guud ahaan baarlamaanka EU-da ku yeelan doona 77 kursi.
Balse waxaa jira wadamo aysan guul fiican ka gaarin cunsuriyiintu oo qaarkood ay ka bexeen baarlamaanka Yurub qaarna ay kuraas lumiyeen. Xisbiyada qasaaray ayaa waxaa ugu caansan xisbiga Freedom Party ee uu hogaamiyo ninka Islaam naceybka ku caanbaxay ee Geert Wilders kuwaasoo lumiyay 1 kursi.
Waxaa sidoo kale baarlamaanka ka baxay xisbiyo yaryar oo ka dhisan Bulgaria, Romania, Greece, Slovenia iyo UK.
Xisbiga SD ee ka dhisan Sweden ayaa helay ka badan cododkii la filayay iyadoo taasi ay argagax ku noqotay Swedish badan iyo siyaasiyiinta. SD ayaa labo kursi ku yeelan doona baarlamaanka, iyadoo la filayo in ay la midoobi doonaan xisbiyada kale ee ay isku fikrada yihiin ee ku jira baarlamaanka. Ujeedka cunsuriyiinta ayaa ah in ay EU-da gudaha ka soo dumiyaan oo sharci kasta ay ka soo horjeestaan.
asc wbr marka hore waan idiin salaamay dhamaan umada somaaliyeed iyo intii islaam ahba, marka labaad wxaaan lee yahay koley islaam naceby ayaa soo batay markaa wxaan u sheegi lahaa dadka baasaboorka swedishka ah haysta ee soomalida ee wdanka degan wlaalayaal codkiina dhiibta waxbuu badali karaa waayo barito xuquuqdaada meel ayaa lagaga dhici karaa markaa hurdada halaga kaco rag ina neceb ayaa soo baxay waana idiin wada salaamayaa
May 26, 2014 at 21:55
hi hi somalidu haday maanta dhiiban waydo codkeeda waxa hubaal ah in la wasi doono oo loogu gali doono guryahooda iyadoona loo kal eegayn rag iyo dumar midno
waxne waan kafahmay qaarna ma fahmin ee xisbika ku guuleestay doorashada EU ma waxee rabaa in aay EU ka kabaxaan oo sida hada liskaga kala goosho wadankaan dhan bilaa fiisa la,aan in aay ka dhigaan fiiso ama anigaa wax si kaleta ufahamay ii kala cadeeya in fahansan arintaan waana aad mahad santihiin
luuqadee wax lagugu fahamsiiya hadii aad somaligaas garan waydo ayeeyo visa iyo waxad ka hadlayso miya mesha kuyaal hhhhh
Asc dhaman walala ha musliminta ah wn idin wada slmy,sln ka bacdii waxan wah la fikra ahay walala ha com kor ku soo qoray ee ah somalida medborgarega ah ha diibtan cod kooda yee is dhi hin marnaba maxaa iga galaya wayo waa maxiim in codkada dhiibta. waxaa laga yaaba inaan wah ficn an ku hilno
walal sahraa xisbiyadan ku soo baxay doorashooyinka waa cunsariin naceb muslimka sii naceb qaxoontiga soo galeetiga ah haday tooda ahan lahed marnaba ma la sii joogen wadamada yurubka ah, tan ad leedahay ma bilaa fiisa lagu soo galaya bilaa fiis iska daaye waxay ka soo horjedan soo golootiga soo galaya wadamadooda